Mkpọmkpọ anụ: Egwuregwu Crawlers Eke Ọkpụkpụ na Ngwá Ọrụ Weghaara Web
N'ụwa nke oge a, ụwa nke sayensị na teknụzụ, niile A ghaghị ịkọwa data dị anyị mkpa, ederede ya nke ọma ma dị maka nbudata ozugbo. Ya mere anyị nwere ike iji data a maka nzube ọ bụla na oge ọ bụla anyị chọrọ. Otú ọ dị, n'ime ọtụtụ ikpe, ihe ọmụma dị mkpa dị n'ime ọnụọgụgụ ma ọ bụ saịtị. Ọ bụ ezie na saịtị ụfọdụ na-agbasi mbọ iwepụta data na nhazi, nke a haziri ahazi ma dị ọcha, onye nke ọzọ anaghị eme nke ahụ.
Ịkwanye, nhazi, nchịkọta, na nhicha nke data dị mkpa maka azụmahịa n'ịntanetị. Ị ga-anakọta ozi site na ọtụtụ isi mmalite ma chekwaa ya na ọdụ data ịzụta iji zute ihe mgbaru ọsọ gị. N'oge na-adịghị anya, ị ga-ezo aka na obodo Python ka ịnweta ụdị mmemme dị iche iche, usoro, na ngwanrọ maka ijide data gị. Ndị a bụ ụfọdụ ihe omume Python a ma ama na ndị dị ịrịba ama maka ịmepụta na ịwagharị saịtị ma gbanyụọ data ị chọrọ maka azụmahịa gị.
Pyspider bụ otu n'ime ọkpụkpọ weebụ Python kasị mma na crawlers na ịntanetị. A maara ya maka ntanetị weebụ ya, nke nwere ntanetị nke na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ịdebe ihe nkedo..Ọzọkwa, usoro a na-abịa na otutu backbas ọdụ data.
Site na Pyspider, ịnwere ike ịchọta ibe weebụ ibe weebụ, webwindows ma ọ bụ blọọgụ site na afọ ma rụọ ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Ọ dị mkpa naanị abụọ ma ọ bụ atọ clicks iji nweta ọrụ gị ma mee ka data gị dị mfe. Ị nwere ike iji ngwá ọrụ a na-ekesa usoro na ọtụtụ crawlers na-arụ ọrụ ozugbo. Enwere ikikere nke Apache 2 ma GitHub mepụtara ya.
MechanicalSoup bụ ọmarịcha ụlọ akwụkwọ na-ewu ewu nke a na-ewu gburugburu ụlọ akwụkwọ ọmarịcha akwụkwọ HTML, nke a na-akpọ Mara Mma Ofe. Ọ bụrụ na ị na-eche na ntanetị weebụ gị kwesịrị ịdị mfe ma bụrụ ihe pụrụ iche, ị ga-anwale usoro ihe omume a ozugbo enwere ike. Ọ ga-eme ka usoro nhịahụ ahụ dịkwuo mfe. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịchọ ka ị pịa igbe ole na ole ma ọ bụ tinye ụfọdụ ederede.
Egwuregwu bụ ụlọ ọrụ ntanetị dị ike nke na-akwado ndị mmepe weebụ na-arụ ọrụ ma nyere ndị ọrụ aka ịmepụta azụmahịa n'ịntanetị nke ọma. Ọzọkwa, ọ nwere ike mbupụ ụdị ụdị data niile, nakọta ma chekwaa ha na ọtụtụ usoro dị ka CSV na JSON. O nwekwara ihe mgbakwunye na-arụ ọrụ ma ọ bụ ndabara iji rụọ ọrụ dịka njikwa kuki, onye na-ahụ maka ndị ọrụ, ma gbochie crawlers.
Ọ bụrụ na ị gaghị enwe obi ụtọ na mmemme ndị a kọwara n'elu, ịnwere ike ịnwale Cola, Demiurge, Feedparser, Lassie, RoboBrowser, na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ikwu na ndepụta ahụ adịghị agwụcha ma enwere ọtụtụ nhọrọ maka ndị na-adịghị amasị PHP na koodu HTML Source .